Imiklamo yangaphakathi izindlu zendawo yokuhlala - Inkampani yangaphakathi yokuklama - Umklami womklami Galati egqamile - Nobili ukwakha ingaphakathi, studio, umklami, umklami, izinkampani, ukuklama, amanani
I-Interior design zangaphakathi zokuhlala - I-Interior design Galati
Ithimba lethu lokudala kusuka ku-Nobili Design Galati laqala ukungena emklamo wangaphakathi kanye nemiklamo yangaphakathi yokwakha 3d izindlu, izindlu zokudlela, izindawo zokudlela, imigoqo, amahhotela, izindawo zokuhweba, amahhovisi kusukela ku-2008. Kithina, kwakungeyona nje umsebenzi, kodwa yingxenye ebalulekile yokuphila. Okuhlangenwe nakho kwethu kanye nezinga eliphakeme lensizakalo lisisize ukuba sibe yinye yezinkampani zokudalwa zangaphakathi ezidume kakhulu nezibalulekile. Kuze kube manje, senze ngempumelelo inani elikhulu lokufakelwa kwangaphakathi kokubili izindawo zokuhlala nezokuhweba. Siphinde senze amaphrojekthi we-3D ngezindlu zakamuva, izindlu zezindlu, izindawo zokuhweba, izikhungo ze-spa, izindawo zokudlela, imigoqo, ama-pizzerias, izikhungo zokuhle nokunye okuningi. Ngaphezu kwalokho, singakwazi ukuhlela amahhovisi angaphakathi ngaphakathi lapho abasebenzi bezwa khona bekhululekile.
Awekho ama-athikili kulesi sigaba. Uma kukhona izigaba ezingezansi kuleli khasi, zingase zibe nezinhlamvu.